अहिले नै जोखिम कम भएको छैन - जीवन शैली - प्रकाशितः वैशाख २९, २०७७ - नारी
वैशाख २९, २०७७ डा. अनुप बास्तोला - प्रमुख कन्सल्टेन्ट शुक्रराज टपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु
नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई जोखिमलाई न्यूनिकरण अपनाउँदै आइरहेको बन्दाबन्दीको रणनीतिलाई विभिन्न जोखिमका क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर अहिले जोखिम कम भएका क्षेत्रमा केही मोबिलिटी, केही काम गर्नुपर्ने संस्थाका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा जानका लागि अनुमति दिएको छ । सरकारी कर्मचारी, वित्तिय क्षेत्रका, उपभोग्य सामान ल्याउने मानिस, निर्माण सामग्री ल्याउने मानिसलाई खुकुलोपन आएको छ । यस्ता रणनीति आएपनि कामका लागि घरबाट निस्कने मानिस कार्यस्थलमा काम गर्न जाँदा कुनै चाडबाड सकिसकेपछि, विदा सकिसकेपछि आएको जस्तो अवस्था भन्दा अहिलेको फरक छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।
नयाँ रणनीतिसँगै आइतबारदेखि बिहानदेखि काममा भीडभाड गरि गएको, बजार गएको देखिएको छ । यसो भन्दैमा समस्या समाधान भइसक्यो समुदायमा कुनै जोखिम छैन, जे गरेपनि हुन्छ भनेर सोच्न नहुने डा. अनुप बताउँछन् ।
सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ । जस्तो कि नियमित साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने आदि । अब कार्यस्थलमा सबैले होशियारी अपनाउनुपर्छ । भीडभाडमा जाने बेलामा मास्कको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कार्यस्थलमा काम गर्दा, बस्दा १ मिटरको सामुदायिक दूरी कायम राख्नु वेश हुन्छ । कार्यालय वा संस्थामा काम गर्ने मानिसलाई खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने समस्या भएमा काममा जानुहुँदैन । तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । घरबाट बाहिर निस्केका, कामकाजका लागि कार्यालयमा गएर फर्कदा हात धुनु विशेष जरुरी छ ।
परिवारमा रहेका वृद्ध मानिस, दीर्घरोगीमा संक्रमण सर्न सक्ने भएकाले युवाहरु कार्यस्थल गएर फर्कदा संक्रमित हुनसक्ने भएकाले सजगता अपनाउनुपर्छ । जोखिम न्यूनिकरण गर्न रिभर्स क्वारेन्टाइन हुनुपर्छ । परिवारका वृद्ध दीर्घरोगीलाई सकेसम्म सुरक्षित राख्नका लागि सम्पूर्ण विधि अपनाउनुपर्छ । फिजिकल डिस्ट्यान्सिङ व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ ।
देश र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रले अपनाएको रणनीति खुकुलोपन लकडाउनम निम्त्याएको छ त्यसलाई पालना गर्दै सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्छ । पछिल्ला डेढ महिनामा सिकेका सिकाई र भोगाईलाई पालना गर्नुपर्छ । दैनिकीमा समावेश गरि व्यवहारमा उतारेर समुदायमा संक्रमित हुनबाट जोगिने र संक्रमणलाई परिवारका सदस्यमा सार्नबाट जोगाउन सम्पूर्ण विधिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
अत्यावश्यक सेवाका लागि अस्पतालमा जादा पनि अस्पतालमा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले त्यहा पनि सामूदायिक दूरी कम गर्ने, हात धुने, मास्क लगाउनुपर्छ । सबैले अहिलेसम्म सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतारेर संक्रमणबाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई जोगाउनका लागि जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह प्रत्येकले गर्नुपर्छ ।